Fifanakalozana Default Default Credit Trade - World Trade Exchange
Avadiho ny vola azo amin'ny kaonty ao anatin'ny 24 ora ary esory ny risika tsy fandoavam-bola!
Amin'ny maha tompona orinasa anao, ny fanomezana ny trosa arahin'antoka amin'ny mpividy sy ny fividianana amin'ny trosa avy amin'ireo mpamatsy anao no fomba anaovana ny asa. Na izany aza, maro amin'ireo mpanjifa nomenao ny trosa varotra no mety tsy afaka mandoa ny entana amidy sy serivisy omena amin'ny trosa noho ny antony samihafa. Raha atao ny salanisa, iray amin'ireo faktiora folo no lasa tsy manara-dalàna, ary maro no lasa trosa ratsy tsy voaloa. Rehefa tsy afaka mitrosa ny trosany ny mpanjifa dia misy vokany ratsy eo amin'ny fikorianan'ny vola, ny vola miditra, ny tombom-barotra ary ny renivohitra. Amin'ny tranga ratsy indrindra, mety hametraka orinasa tsy amin'ny orinasa izany.
ny antony NY OLANA TSY fandoavambola
Ny trosa tsy andoavana na tsy voaloa matetika dia mipoitra rehefa manjary tsy mahavita vola ny mpanjifa ary tsy manam-bola ampy handoavana ny trosany. Ary koa, ny mpanjifa dia mety tsy afaka mandoa ny trosany noho ny loza voajanahary, ny loza ateraky ny mpampihorohoro, ny risika ara-toekarena, na ny loza ateraky ny areti-mandringana toy ny ady, ny asan'ny Governemanta ampitan-dranomasina, ny famerana ny fanafarana / fanondranana ary ny famerana ny famindrana vola. tsy voafehin'izy ireo.
NY VAHAOLANA FARANY?
NY VAHAOLANA FARANY AMIN'NY OLANA TSY FANARAHANA TSY MISY FANDRAVANA NO TRADE CREDIT DEFAULT SWAP!
Mba hiarovana amin'ny loza ateraky ny mpividy sy ny fatiantoka ara-bola amin'ny tsy fandoavam-bola, matetika manararaotra ny Trade Credit Default Swap ny orinasa.
INONA NO VOAFITRA VAROTRA CREDIT DEFAULT?
Trade Credit Default Swap dia fitaovana ara-bola miaro ny orinasa amin'ny loza mety hitranga avy amin'ny mpividy sy ny fatiantoka ara-bola amin'ny tsy fandoavana entana na serivisy ataon'ny mpividy. Ohatra, raha tsy mandoa anao ny entanao na ny serivisy omenao amin'ny trosa, ny mpanjifanao, dia WTE arovy ny asanao amin'ny alàlan'ny fandoavana anao 100% amin'ny trosan'ny mpanjifanao. Tsy misy fatiantoka, tsy misy fanoratana, ary tsy misy fanoratana. Ity dia miantoka ny fiarovana ny renivohinao, ny fikojakojana ny vola ary ny fampindramam-bola ary ny fandoavana ny vola azo, ary ny vola azo dia azo antoka amin'ny tranga misy anao.
NAHOANA NY INVESTA AMIN'NY TRAPE CREDIT DEFAULT SWAP?
Azonao atao ny manafoana ny fandoavam-bola
Ianao dia azo antoka 100% hahazo karama amin'ny vokatrao na serivisinao na dia tsy mahalany vola aza ny mpanjifanao ary tsy manam-bola ampy handoavana ny trosany.
MITADIAVA TRANO TRANO
ARY MBOLA HANDOAASA 24 ora
Avereno ny sandam-bola feno amin'ny fampindramam-bola ratsy rehetra, fananana ketraka na tsy mandeha, trosa tsy voatrandraka ary tsy voangona ao anatin'ny 24 ora.
HAHAZO FANAFAHANAO IZAO
Fandoavana ao anatin'ny 24 ora.
Raha tsy mandoa anao ara-potoana ny mpanjifanao amin'ny entana na serivisy atolotra amin'ny trosa, dia avy eo WTE dia handoa anao ny 100% amin'ny trosa ao anatin'ny 24 ora.
SOA 9 NY FOMBA FIVAROTANA NY TRANO CREDIT DEFAULT mankany amin'ny orinasanao
Hisorohana ny fahaverezan'ny talohan'izy ireo
Ny Trade Credit Default Swap dia afaka manampy amin'ny alàlan'ny familiana ireo orinasa lavitry ny loza mety hitranga voalohany ary matetika no voalohany mahatsapa ireo orinasa manana olana ara-bola. Ny fampahalalana toy izany dia mety hanampy amin'ny fampihenana ny fampahalalana na farafaharatsiny mba hahazoana antoka fa tsy ampitomboina amin'ny fotoana tsy mety izany!
Arovy amin'ny fanoherana ny fahaverezan'ny mpanjifa amin'ny varotra vita amin'ny fe-potoana CREDIT.
Raha sendra trangam-bola tsy azo ihodivirana, na raha tsy mandoa ara-potoana anao ny mpanjifanao noho ny entana sy / na serivisy omena amin'ny trosa, dia WTE arovy ny asanao amin'ny alàlan'ny fandoavana anao 100% amin'ny trosanao.
Mampihena NY FAMARIHANA RATSY AROVY MIARO NY ORINASA MITSANGATRA AMIN'NY FANAVOTANA RATSY
Ny fiarovana ny karama dia midika fiarovana amin'ny trosa ratsy, fihenan'ny famatsiana trosa ratsy ary renivohitra afaka ho an'ny salama salama. Ary koa, ny premium premium swap default dia tsy afaka hetra, fa ny tahiry trosa ratsy kosa tsy.
HAMPITARIHA NY MPIVAROTRA HO AN'NY MPIVAROTRA MANARAKA SADY MANDAINGANA HATANA HATANA 1,000 30% AZY XNUMX ANDRO
Raha arovan'ny fifanakalozana default default ny trosa dia afaka mivarotra 10X bebe kokoa amin'ny mpanjifa efa misy ny orinasa iray, na manenjika mpanjifa vaovao izay mety ho noheverina ho mampidi-doza loatra. Noho izany, ny orinasa dia afaka mampitombo ny varotra hatramin'ny 1,000% ao anatin'ny 30 andro.
MITADIAVA HEVITRA TSY MISY ATAHORANA
Ny trosan'ny varotra arovana sy ny fanatsarana ny fitantanana azo isa amin'ny alàlan'ny Credit Default Swap dia nampitombo ny tombom-barotra. Ny fifanakalozana default amin'ny crédit matetika dia mety hanonitra ny vidiny manokana imbetsaka, na dia tsy mitaky fitakiana mihitsy aza ilay orinasa, amin'ny fampitomboana ny tombom-barotra amin'ny orinasa tsy misy risika fanampiny.
MITADIAVA AMIN'NY tsena iraisam-pirenena vaovao tsy misy risika
Ny Trade Credit Default Swap dia afaka manome fiarovana anao amin'ny risika fanondranana tsy manam-paharoa, manampy anao hiditra amin'ny firenena vaovao, ary hampitombo ny varotra amin'ny alàlan'ny famelana ny teny fifaninanana bebe kokoa hatolotra ny mpanafatra noho ny fanekena raha tsy misy risika.
Arovy ny tombony, ny onjam-bola, ny kapitaly ary ny asa
Raha misy fatiantoka tsy ampoizina, ny Trade Credit Default Swap dia manome onitra, ka hiarovana ny vola miditra, ny tombom-barotra, ny taratasy mizana ary ny mpiasa amin'ny tranga mety hanimba ara-bola. Noho izany, ny TCDS dia mety ho fampiasam-bola hendry indrindra azon'ny orinasanao hiantohana ny fiarovana ny tombom-barotra, ny vola, ny renivohitra ary ny asany.
MITADIAVA INFO IN-UP-TO-DATE ho an'ny fanapahan-kevitra CREDIT tsara kokoa
WTE Matetika dia misy fampahalalana bebe kokoa amin'ny fampahalalana vaovao izay tsy eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe noho ny masoivohom-panjakana izay heverin'ny maro ho malala-tanana amin'ny heviny momba ny trosa satria mazava ho azy fa tsy mandray risika izany. WTENy tahiry fampahalalam-baovao sy ny sehatra teknolojia dia hanampy anao hampihena ny vidin'ny asa sy fampahalalana.
NY TRADE CREDIT DEFAULT SWAP dia afaka manampy amin'ny famatsiam-bola amin'ny banky mahasarika
Ny fifanakalozana credit default default dia afaka manatsara ny fifandraisan'ny orinasa amin'ireo mpampindrana azy amin'ny alàlan'ny fanomezana fiarovana ny banky sy ireo karazana mpampindrana hafa amin'ny varotra na ara-bola fanondranana. Makà fe-potoana ara-bola tsara kokoa - Matetika ny banky dia hampindrana renivohitra bebe kokoa arakaraka ny trosa arovana.